Ishedyuli ye-Gucci Runway ngoku iyaphungulwa kabini ngonyaka
Ikamva le-Runway Iyatshintsha: Ishedyuli ye-Gucci Catwalk Ngoku Iyaphungulwa kabini unyaka
Nkudala kwakudala sincokola ngendlela ushishino lwefashoni luya kutshintsha ngenxa yokuqhubekeka ubhubhani we-coronavirus, kwaye olu tshintsho luyenzeka ngokukhawuleza. Indlu yefashoni yase-Itali uGucci sele eyicwangcisile ibhola eqengqelekayo ngokutshintsha ishedyuli yabo ye-catwalk kabini ngonyaka.
Umlawuli wokuyila Alessandro Michele Utyhile ukuba ukuvalwa kwe-COVID-19 kumenze wajonga kwakhona indlela esebenza ngayo indlu yaseTaliyane kunye nolunye lweenguqu zokuqala ezinkulu agqibe kwelokuba azithathile kukunciphisa indlela iGucci ibamba imiboniso kakhulukazi kunye nexesha layo lewebhu. unyaka. Asinakukunceda kodwa uzibuze ukuba ingaba imodeli zendlela zabaleka ziya kuchaphazeleka njani kolu tshintsho lukhulu.
"Ndiza kuwushiya isiko elidala lamaxesha onyaka kunye nemiboniso yokubuyela kwakhona kwakhona, kufutshane nomnxeba wam ocacileyo. Siza kudibana kabini ngonyaka, sabelane ngezahluko zebali elitsha.
-Alessandro Michele, UMlawuli oYilayo, uGucci
NgokukaVogue, iGucci luphawu lwesibini oluhle, emva kweSaint Laurent, ukucacisa utshintsho olubanzi kwindlela abathengisa kunye nabathengisa ngayo nefashoni.
UGucci Fall 2019 kwiVeki yeMfashini yaseMilan
Kwinqanaba lezithuba ze-Instagram ezabiwe kwi-Instagram ka-Gucci, u-Alessandro wabhala:
"Ndiza kuwushiya isiko elidala lamaxesha onyaka kunye nemiboniso yokubuyela kwakhona kwakhona, kufutshane nomnxeba wam ocacileyo. Siza kudibana kabini ngonyaka, sabelane ngezahluko zebali elitsha. Izahluko ezingaqhelekanga, ezonwabisayo, kunye nezisimahla, eziya kubhalwa ngokudibanisa imigaqo kunye nohlobo. Ukondla kwiindawo ezintsha, iikhowudi zolwimi, kunye neqonga lonxibelelwano.
… Ukuhamba ngenqanawa, ukuwa ngaphambi, ihlobo laseNtwasahlobo, ukuwa kobusika. Ndicinga ukuba la ngamazwi anqabileyo kunye naphantsi. Iilebhile zentetho engaphelelanga ilahlekileyo intsingiselo yayo. Izithako ezithi ngokuthe ngcembe zizikhulule kubomi obabudaleleyo, ziphulukene nobunyani. ”
Ikamva elitsha lilindele inkcubeko yokubaleka
Ndiyakholelwa ukuba singakha ikamva lethu kwakhona ngokuqala kumgangatho wehlelo. Nantsi iminqweno yokubhaptiza ukudibana kwethu okutsha ngokubiza amagama emva kolwimi olunengcambu yakudala emangalisayo: ulwimi lomculo weklasikhi. Ngokuhambelana, kuya kubakho i-symphonies, i-rhapsodies, i-madrigals, i-nocturnes, i-overtures, iikhonsathi, kunye ne-minuets ekuqulunqweni kwendlela yam yokuyila. Umculo, emva kwayo yonke into, unamandla angcwele okuvelisa ukubuyisela kunye nokudibanisa. Ihamba ngaphaya kwemida, iphinda iqhagamshele ubuthathaka bento (inf). "
The I-Council of Designers of America kunye neBritish Fashion Council ibize esidlangalaleni "isantya esisezantsi" kwaye ikhwaza ukuveliswa okuthe gabalala kunye nokuhanjiswa. Endaweni yoko, bacebisa ukuvelisa iimveliso ezincinci ezinobuchule ngakumbi kunye nomgangatho ophezulu. Bakwacela ukuba kutshintshwe i-cadence, ukuhambisa okuhambelanayo ngakumbi nangakumbi xa kufuneka abathengi.
Funda inqaku elipheleleyo Vogue.
Alessandro Michele ubhubhani we-coronavirus I-Covid-19 Gucci Ishedyuli ye-Gucci Catwalk